Galaxy Note 10 သည် 9825nm Exynos7| နှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည် Androidsis
Exynos 9825 သည် Samsung ၏ပထမ ဦး ဆုံး 7nm SoC ဖြစ်သော Galaxy Note 10 နှင့်အတူလာခြင်းဖြစ်သည်
Samsung ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် chipset သည် Exynos 9820။ ၎င်းသည်နောက်ဖုန်းများကိုပါဝါပေးပါလိမ့်မည် Galaxy 10 seriesဒါကပေါ်လာလိမ့်မယ် လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ 20 တရားဝင်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအရ 'S series' တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အထင်ကရချစ်ပ်များသည်လည်းထိုနှစ်တွင်ပင်ဖြန့်ချိခဲ့သော Galaxy Note ကိုပါဝါပေးရမည်။ ထိုနောက်မှ Galaxy X ဟုလည်းကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော Galaxy 10 နှင့် Galaxy Note 10 တို့သည်တူညီသောပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူလာသင့်သည်။ သို့သျောလညျး, ဒီနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Ice Universe အကောင့်မှထုတ်ဝေသော Weibo အကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့သည် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် Exynos 9825 ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်.
ဒီ post ကိုဘယ်လိုပုံစံရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ Exynos 9820 ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း Samsung က၎င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ချက်ကိုယခင်နှစ်ကကြေညာခဲ့သည်။ အဲဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့ငါတို့ထင်တယ် ယခုနှစ်တွင်ဖုန်းများတွင် Exynos 9825 chipset ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်, နှင့်အခြားထက်အခြားပေါ်ထွက်လာဖို့ဘာပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းကို Galaxy Note 10 / Note X?
ပရိုဆက်ဆာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ Exynos 9820 ထက်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် GPU နှင့် CPU အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနာရီအမြန်နှုန်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ် Exynos7သည် 9820nm chipset ဖြစ်သည့်အတွက် 8nm ဖြစ်စဉ်နှင့်ပင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်အထိပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Qualcomm နှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် bandwagon ကိုမူယခုအချိန်အထိတိုးမြှင့်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ Huawei သည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည် Snapdragon 855 y 980.
ဤရွေ့ကားထင်ကြေးဖြစ်ကြသည်ဒါကြောင့်ဆားတစ်ခွက်ကိုယူရန်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအသိပေးရန်သေချာပါလိမ့်မည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ Galaxy S10 ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုစောင့်ဖို့ပဲလိုတယ်၊ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်တွေကိုဖွင့်လိုက်တာသေချာတယ်။
(Fuentes | မှတဆင့်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Exynos 9825 သည် Samsung ၏ပထမ ဦး ဆုံး 7nm SoC ဖြစ်သော Galaxy Note 10 နှင့်အတူလာခြင်းဖြစ်သည်
Google Fitala Black Amoled ကိုအစားထိုးခြင်း